Kumaa loo doortay Man of the match kulankii Stoke City iyo Manchester United? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kumaa loo doortay Man of the match kulankii Stoke City iyo Manchester United?
(10-9-2017) Kadib kulankii bareejada ku dhamaaday ee dhex maray kooxaha Stoke City iyo Manchester United ayaa waxaa lasoo saaray Cayaaryahankii kulankaas loogu doortay in uu ahaa Man of the match kaas oo ahaa kii ugu fiicnaa dhamaan intii dheeshey labada kooxoodba.
Cayaaryahankii ugu fiicnaa Garoonka ayaa waxaa loo doortay Xiddigii labada Gool ka dhaliyey Manchester United ee Eric Maxim Choupo-Moting kaas oo noqday Cayaaryaahnkii ugu fiicnaa dhankasta dhamaan Cayaartoydii Cayaartaas.
Stoke City ayaa hakisay Recordkii Boqolkiiba boqol ahaa ee ay ku socotey kadib markii ay ku celiyeen bareejo 2-2 ah sidoo kale Waxaa Stoke City jabisay Recordkii ahaa in aan weli shabqeeda lataaban Man United waxaana shaqdaas o dhan qabtay Eric Maxim Choupo-Moting kaas oo loo doortay in uu ahaa Man of the match.